Cialis 20mg အလုပ်လုပ်ဘို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူပါသလဲ? | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/Cialis , tadalafil/Cialis 20mg အလုပ်လုပ်ဘို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူပါသလဲ?
အပေါ် Posted 10 / 12 / 2017 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Cialis, tadalafil. ဒါဟာရှိပါတယ် 1 မှတ်ချက်.
လို့ခေါ်တဲ့မူးယစ်ဆေးများအတွက်ကုန်သွယ်မှုအမည်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည် ။ Cialis PDE-5 (Phosphodiesterase type ကို 5) inhibitors အဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်လူတန်းစားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cialis နှင့်အခြား PDE-5 inhibitors ယောက်ျားသည်လိင်နှိုးဆွနေသည်အခါ erectile တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (အထီးခွန်အားမရှိခြင်း) နဲ့ယောက်ျားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဘေးဖယ် Cialis ကနေ, ဒီလူတန်းစားအတွက်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း (Sildenafil) နှင့် Levitra (Vardenafil) ။
ဘယ်လို Cialis ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အလုပ်လုပ်ပါသလဲ
Cialis ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တစ်လူကိုလိင်နှိုးဆွစေပါဘူး။ လူတစိတ်ပိုင်းလိင်နှိုးဆွလျှင် Cialis ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုသာထိရောက်ပါလိမ့်မည်။ Cialis ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ရန်သင့်အားလူတတစ်ခုစိုက်ထူရရှိသွားတဲ့ဘယ်လိုများ၏စက်ပြင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာလူတလိင်သင့်ရဲ့လိင်တံလွှတ်ပေးနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် (NO) ၏ erectile တစ်ရှူးထဲမှာ, ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏နှိုးဆွနေသည်။ အဆိုပါနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်သိသိ guanosine monophosphate (cGMP) လို့ခေါ်တဲ့ '' တမန် '' ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဇိုင်းကိုလှုံ့ဆျော။ အဆိုပါ cGMP ချောကြွက်သားဆဲလ်တွေပြေစေပြီး။
ဒီတစျခုရလဒ်လိင်တံ dilate နှင့်အသွေး၌သွေးလွှတ်ကြောကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာလိင်တံထဲသို့စီးဆင်းနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နောက်ထပ်ရလဒ် erectile တစ်ရှူးသူ့ဟာသူအသွေးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအဖြစ်စဉ်များနှစ်ယောက်စလုံးတစ်ခုစိုက်ထူမှု။ Cialis ချောကြွက်သားဆဲလ်များတွင် cGMP များ၏အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျစိတျပိုငျးလိင်နှိုးဆွကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင့်ဦးနှောက်ကိုမည်သည့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်များလွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်မည်မဟုတ်နှငျ့သငျ cGMP ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်မည်မဟုတ်။
တချို့ယောက်ျား Cialis နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်ပျမ်းမျှအားတွင်, Cialis နာရီအတွင်းထိရောက်သောဖြစ်လာသည်။ Cialis တက် 36 မှနာရီထိရောက်သောဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါ။ ဒါကစိုက်ထူကြောင်းကြာရှည်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ - သင်အချိန်ကြောင်းကာလတစ်ခုတိုးတက်လာသောစိုက်ထူမှီနိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ်ရိုးရိုးလေးစေသည်။ Viagra နှင့်မတူဘဲတစ်မုန့်ညက် Cialis ၏ထိရောက်မှုကိုနှောင့်နှေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အခြားဆေးဝါးများ, နှင့် Levitra အလားတူနည်းလမ်းအလုပ်။ Cialis Levitra နှင့် Viagra ထက်အများကြီးပိုရှည်ဝက်ဘဝရှိပြီးထို့ကြောင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးပိုရှည်ကြာရှည်ခံသည်။ ဤသည်မှာလူတကြာရှည်စိုက်ထူရလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါဒါပေမဲ့နောက်ထပ်စိုက်ထူများအတွက်ရရှိနိုင်အချိန်ရဲ့အရှည်နောက်ထပ်ဆေးများယူရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲတိုးလာနေပါတယ်။ ဒါဟာအစဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပစ္စုပ္ပန်လျှင်ပိုရှည်ကြာရှည်လိမ့်မည်ဟုသို့သော်ဆိုလိုသည်။ Viagra တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်ယူသင့်ပါတယ်သော်လည်း Cialis, Levitra ကဲ့သို့အစားအစာနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
Tags: Cialis အမှုန့်ကိုဝယ်, tadalafil အမှုန့်ကိုဝယ်, cialis အမှုန့်, tadalafil အမှုန့်, tadalafil အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
4520 Views စာ
သငျသညျ cialis အမှုန့်သုတေသနမပြုမီကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်6မေးခွန်းများကို
Cialis အမှုန့်သုတေသနအကြောင်းကိုထိပ်5ဖြစ်ရပ်မှန်များ
Asan06 မှာ 19 / 2018 / 8: 59 နံနက်
မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိပါသည်။ မူလတန်း (မွေးရာပါ) ယောက်ျားသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်ရှားပါးသည်။ secondary erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု-အသုံးအများဆုံး option ကိုကာလအချိန်များအတွက်ယောက်ျားသည်အရာခပ်သိမ်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၌ဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒဏ်ငွေခဲ့, သာထို့နောက်စိုက်ထူနှင့်အတူပြဿနာများရှိခဲ့သည်။ သငျသညျလျင်မြန်စွာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည် http://www.aasraw.com/contact/
yohimbine ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ?	Cialis: ဘယ်လိုယူပါရန်နှင့်မည်သို့ Long ကကကြာ